यो एउटा रङ
आँखा सबैभन्दा ठूलो सत्य हो । यो मात्रै एउटा यस्तो शक्तिशाली प्रविधि हो, जसलाई मानिसको शरीरमा अभिन्न रहेको क्यामरा भन्दा केही फरक पर्दैन । यो क्यामराको क्षमता कति मेगा पिक्सेलको हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै शरीर वैज्ञानिकले, कुनै चिकित्सकले, कुनै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका धुरन्धरले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । न त यसको स्टोरेज क्यापासिटीका बारे साधिकार कसैले बोलेका नै छन् । शहरहरूको दृश्यचित्र लगभग यस्तै नै हो । आँखाले यसलाई जति समेटन सक्छ, सत्य त्यति मात्रै हो । सत्यको कुनै सीमा हुँदैन । शहरको पनि कुनै सीमा हुँदैन । मानिसका असीमित आकांक्षासँगै यसका सीमाहरू अनियन्त्रित हिसाबले फैलिन थाल्दछन् । जलकुम्भीका जराहरू जस्तै ।
सागर र शिखरको कथा
Read: 2772 times
बेला यस्तो पनि थियो, महासमुद्रको आक्रामक र उत्तेजक छाल जस्तै उग्र वन्दथ्यो सागर । पानीको भित्री सतहबाट उठदै उठदै, मानिसले कल्पनागर्नै नसक्ने उचाईमा पुगेर, त्यो छाल वगरमा वज्रिन्थ्यो, र, चर्को घामले तातेको वगरमा एकहुल माछा हुत्याएर, फेरी पानीमा छलाङ माथ्र्यो । छाल फर्किएपछिका केही निमेष चारैतिर शान्ति छाउँथ्यो । केही भएकै छैन जस्तो । समुद्री चराहरु चिरविराउन थालेका मात्रै हुन्थे, सम्पूर्ण वेग सहित छाल फेरी फर्किन्थ्यो । बगरको तातो बालुवामा छटपटाइ रहेका हुन्थे माछाहरु । केही साना माछाहरु जसोतसो उफ्रिदै पानीमा पुगेपनि ठूला माछाहरुको छटपटी साह्रै दर्दनाक हुन्थ्यो ।
Read: 2863 times
कति राम्री गरिमा !
Read: 2878 times
Read: 2820 times
भुवाभित्र, अलमलमा जीवन
Read: 4882 times
Read: 4035 times